Kedu ihe bụ Ndenye ederede Na-azaghachi? Etu esi dee Detuo nke na-agbanwe | Martech Zone
Kedu ihe bụ Ndenye ederede Na-azaghachi? Esi dee Detuo nke na-agbanwe
Tọzdee, Septemba 6, 2018 Wednesday, September 5, 2018 Douglas Karr
Ihe ederede ederede adighi aga. Anọgidere m na-eju anya ka m na-enyocha isiokwu ndị nwere mmasị site na ọchụchọ na mmekọrịta mana mgbe m malitere ịgụ isiokwu ahụ, ọ bụ naanị ihe na-agwụ ike ma na-enweghị nkọwa. Ọ bụrụ na i wulite ibe ibe abụọ na-enye otu onyinye ahụ, ana m ekwe gị nkwa na nke onye ode akwụkwọ nwere ọgụgụ isi dere ga-etinyekwu uche. N'akụkụ ederede, m ka na-achọ ịbụ nnukwu onye edemede. Edere m kemgbe afọ 10 wee gaa n'ihu na-amụ ihe.
Koeppel Direct's infographic na-adịbeghị anya, Ntughari Ntugharị Ntugharị: Detuo ederede nke na-agbanwe, na-ekerịta ụfọdụ n'ime ihe nzuzo nzuzo nzigharị nzaghachi na ụwa zuru ụwa ọnụ. Muta otu esi eme aka oru nke onye na-egbu mmadu (DR) n'oge na-adighi anya, ma obu ma obu opekata mpe otu ndi okacha mara nma gi si eji nkpisi aka ha mee ihe iji mee ka ndi mmadu mara ihe.
Kedu ihe bụ Detuo Azịza?
Nzaghachi ozugbo bụ ahịrịokwu akọwapụtara na usoro idetuo ederede ma ọ bụ usoro mgbasa ozi ebe ịchọrọ ịme ihe zuru oke. Ntughari nzaghachi ma obu mgbasa ozi mgbe nile nwere oku ime ihe nke nwere ihe ngbaputa ngwa ngwa. Ihe Nlereanya ga-abụ peeji nke ọdịda ebe ụdị jupụtara ma ọ bụ pịa bọtịnụ-oku na-aga na ịkpọ oku. Ibe ndasa na-eji nnomi nzaghachi ozugbo.
Peter Koeppel na-egosi ntụzi aka depụtaghachi nzaghachi 5 ka ị bido:
Kpebie ihe mgbaru ọsọ maka akwụkwọ gị. Are na-ere akpụkpọ ụkwụ ka ị na-achọ ime ka mmadụ nye onyinye na ihe kpatara ya?
Kwadebe ụzọ gị. Kedu ka ị ga-esi mezuo ebumnuche ahụ? Oge erugo maka obere ihe!
Kwadebe iji gosipụta uru ị bara. Na-egosi mgbe niile, agwala ya, uru ole ị na-eweta na tebụl. Mee ndepụta nke ụzọ ị ga - esi mepụta mgbanwe dị mma ma ọ bụrụ na ebumnuche gị mee ihe ị rịọrọ.
Hazie isi ihe gị ndepụta iji kasị baa uru maka ihe mgbaru ọsọ mbụ gị ruo na nke kachasị.
Ewepụ ya. Bibie ihe ndị na-adịghị arụ ọrụ nke ọma.
Ihe omuma ihe omuma ihe omuma nke obula n’ime nhazi iji dozie, dee, ma bulie uzo nzaghachi gi. Ọ nkọwapụta optimizing ọ bụla na-ajụ, ọ bụghị naanị oku na-aga ime ihe. Peter na-enyekwa ihe atụ ole na ole nke otu mgbanwe dị mfe na ịsụ asụsụ nwere ike isi metụta onye na-agụ ya:
"Ohere”Utu ke“ Inikiet ko ke ofụri eyouwem. ” Ọ bụ otu ugboro na ndụ? Eleghị anya ọ bụghị. O buru na obu, gini mere ina erere ya onye ozo? Banye na nke ahụ n'onwe gị!
"Discover”N’ọnọdụ“ Ahụtụbeghị mbụ. ” Na-ere ihe, yabụ na ị ga-ahụrịrị ya, ma ọ dịkarịa ala na foto nke onye nọ ebe ahụ n'ezie.
"nanị”N'elu" Mee ọsọ ọsọ! " Ọ bụ ezie na oge nwere ike ịbụ ihe mkpali, a na-ejizi nke a nke na ọ nweghị ike ọ bụla. Onyinye na-agwụ na nkeji ole na ole abụghịkwa-aga.
Nke a bụ nkọwa zuru ezu, Ntughari Ntugharị Ntugharị: Detuo ederede nke na-agbanwe:
Tags: detuo ederedeusoro ederedendetu ederedectandetunzaghachi ozugboDirect nzaghachi mkpọsaNtughari nzaghachiotúinfographickoeppel kpọmkwempeter koeppeliheKedu ihe bụ nzaghachiokwuede ederede
Echeghị m na ire ahia bụ ịkpata ego
Ntuziaka 5 na otu esi akwụ ụgwọ nyocha ndị ahịa na mgbasa ozi